Daylight Hack များဖြင့်သေဆုံး🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Aimbot, ESP, Wall Hack နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများပါ ၀ င်သောယုံကြည်စိတ်ချရသော Dead by Daylight Hack ရရှိထားသည့်အတွက်ထိတ်လန့်သောပရိသတ်များသည်ဝမ်းမြောက်နိုင်ပါသည်။ သေခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းသည်မည်သည့်အခါမျှပျော်စရာမဟုတ်ခဲ့ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Dead အား Daylight hacks များမ ၀ ယ်မီသင်ဝယ်ယူရန်ရှာဖွေနေသည့် tool ကိုမကြာသေးမီကနောက်ဆုံးပေါ်သို့မဟုတ်အသစ်ဖြစ်နေဆဲရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နေစဉ်၊ အချို့သောအခြေအနေများတွင်အချိန်ဖြန့်ဝေမှုနှောင့်နှေးနေသည်။ များသောအားဖြင့်ချက်ချင်းဆိုသလို၊ နာရီအနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးသည် HWID သော့ခတ်ထားခြင်းခံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့ကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည် - သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးနှင့်အဆင်ပြေကြောင်းသေချာပါစေ။ product product ကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ပြန်အမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ရွေးချယ် နေ့အလင်းရောင်အားဖြင့်သေလွန်သောသူတို့သည် hack
Daylight Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & More တို့ကသေဆုံးသည်
Hoplit ကို Hack
ယ်ယူရန် နေ့အလင်းရောင်အားဖြင့်သေလွန်သောသူတို့သည် Hack in4ခြေလှမ်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံစိတ်ချရသောသီးသန့်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေခြင်း (ဖောက်သည်များ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်)
သင်၏သော့ကိုရယူပြီး Daylight Hacks ဖြင့်သေများကို Download လုပ်ပါ။
သင်၏ထုတ်ကုန်သော့ကိုရရှိပြီးပါက Deadlight Daylight Hack မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
Daylight Hacks ဖြင့် Gamepron Dead ကိုဘာကြောင့်သုံးရတာလဲ။
Dead by Daylight သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်အားသာချက်တစ်ခုရရှိရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသော်လည်းသေနတ်သမားအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သောဂိမ်းများတွင်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Gamepron ကမင်းကိုရှင်သန်နေစေဖို့ကြိုးစားနေတာပဲ။ Dead by Daylight သည်ကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကစားသမားတစ် ဦး ကိုအသက်ရှင်ရန်အဝေးကွင်းမှထွက်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့် - Daylight Hack မှ Dead ကိုအသုံးပြုခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများရရန်နေရာများစွာရှိသည်။ DBD Hacks ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်အားလွယ်ကူစွာရှင်သန်နိုင်ရန်ကူညီနိုင်ရုံသာမကသင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာသတ်ဖြတ်နိုင်သည်။ သငျသညျ Killer သို့မဟုတ် Survivor အဖြစ်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမသက်ဆိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Deadlight Daylight Hack သည်သင်မည်သို့ပင်ကူညီပေးပါစေ။
Gamepron သည်“ ပရီမီယံ” ဟုသတ်မှတ်ခံရရန်ရည်ရွယ်သည့် cheat များကိုဖန်တီးသည်။ ကစားသမားအများစုသည် Daylight hacks အားဖြင့်သူတို့၏ Dead ကိုပိုက်ဆံမဖြုန်းချင်ကြသောကြောင့်ဤအရာများသည်သင်အသုံးပြုခဲ့ဖူးသောအခမဲ့ကိရိယာများမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်အလျင်အမြန်ပိတ်ပင်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်အကျိုးကျေးဇူးမှမခံစားရသူများဖြစ်သည်။ အားလုံး cheat ။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲများသည်အမြဲတမ်းပြaနာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည် Daylight Hack မှအရည်အသွေးမြင့်သော Dead ကိုရရှိကြောင်းသင်သိလိုပါက Gamepron သည်သင်ယုံကြည်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော hack developer ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းငယ်ဘက်လိုက်မှုရှိသည်မှာထင်ရှားသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုသင်ကြိုးစားကြည့်ပါက မင်းအတွက်မင်းလည်းအဲဒီလိုပဲပြောလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုစိတ်ချရသောယုံကြည်ရသော (အခြားသူများအကြား) DBD Hacks များကိုတီထွင်ရန်အတွက်သီးသန့် developer များအဖွဲ့ကတီထွင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လွှတ်ထားပြီးဖြစ်သောကိရိယာများပင်လျှင်၎င်းတို့သည်အလုပ်လုပ်ရန်သာမကပိတ်ပင်ထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုသူများအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစေရန်အမြဲတမ်းမွမ်းမံနေသည်။ မှန်တယ်၊ ၁၂ နှစ်အရွယ် Steam အကောင့်ရှိသော“ Original Gamers” များအားလုံးပိတ်ပင်ထားခြင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်တဲ့ hack တွေရဲ့ပြယုဂ်တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်သုံးစွဲသူတွေထပ်ပြီးထပ်ပြီးပြန်လာကြတာပါပဲ။ ဂိမ်းထွက်လာတိုင်းဂိမ်းတစ်ခုနှင့်ထပ်မံပေါင်းထည့်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောခေါင်းစဉ်အားလုံးအတွက်မကြာသေးမီကယုံကြည်စိတ်ချရသော hack များကိုသင်လိုချင်ပါက Gamepron သည်သင်မှတ်သားထားရမည့်တစ်ခုတည်းသောနာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Daylight Hacks မှသင်၏ Dead ကိုဝယ်ယူရန်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ထင်ရှားသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Daylight Wall Hack (ESP) မှသေဆုံးသွား
Deadlight by Deadlight Player ESP (အမည်၊ ကျန်းမာရေးအရက်ဆိုင်၊ အကွာအဝေး)
Daylight Item ESP မှသေတ္တာများဖြင့်စစ်ထုတ်သည်
Daylight Aimbot အားဖြင့်သေပြီ
Daylight super jump mode ဖြင့်သေသည် (activate မလုပ်လျှင်ပျက်စီးခြင်းမရှိ)
မိုbone်းလင်းအရိုးအားဖြင့်သေ & key ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သည်။
Daylight Recoil လျော်ကြေးအားဖြင့်သေပြီ
အကောင်းဆုံး နေ့အလင်းရောင်အားဖြင့်သေလွန်သောသူတို့သည် ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ
ကစားသမားများကိုအစိုင်အခဲများ၊ Daylight Player ESP by Dead နှင့်အတူလူသတ်သမားကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သူ၊
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကစားသမားမော်ဒယ်လ်ကိုကြည့်ခြင်းကမလုံလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်ကိုအခြားအသုံးဝင်သော ESP သတင်းအချက်အလက် (အမည်၊ ကျန်းမာရေးအရက်ဆိုင်နှင့်အကွာအဝေး) ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေခွင့်ပြုသည်။
ငါတို့၏ DBD Hack အတွင်းရှိ filter များပါ ၀ င်သော ESP ကိုသုံးသည်။ နံရံများနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောမျက်နှာပြင်များမှတဆင့်အသုံးဝင်သောအရာများကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
သင်သည်ငါတို့၏ Dead ကို Daylight Aimbot ဖြင့်အသုံးပြုသောအခါ Killers နှင့် Survivors နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Daylight Bullet လမ်းကြောင်းဖြင့်သေသည် (တိုသည်နှင့်အလယ်အလတ်ထိပါသည်)
Dead အား Daylight Aimbot အားဖြင့်သင်လိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အရိုး ဦး စားပေးမှုပင်ပါဝင်သည်။
၎င်းသည်အမြဲတမ်းပြaနာမဟုတ်ပါကပေါ်လာသည့်အခါ၎င်းသည်ပြissueနာဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DBD Hack တွင်ပါဝင်သော Recoil Compensator ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။
Daylight super jump mode ဖြင့်သေသည်။
ရန်သူကသင့်ကိုရည်ရွယ်သည့်အခါ (သို့မဟုတ်အနီးကပ်နီးကပ်လျှင်) Warning လုပ်ဆောင်ချက်သည်သင်၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သတိပေးစာတန်းတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်
မိုbone်းလင်းအရိုးအားဖြင့်သေ & key ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dead အား Daylight Aimbot ကို သုံး၍ သင်၏ကြွေးကြော်သံများကိုကြည့်။ မြင်နိုင်သောစစ်ဆေးမှုများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ပျောက်ဆုံးခြင်းသည်ဤနေရာတွင်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ!
အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် Daylight by Dead ဟာယှဉ်ပြိုင်မှုဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်“ hide and seek” ၏ virtual game နှင့်ဆင်တူသည်။ ရှာတွေ့မည့်အစားမြေပုံကိုအမှတ်စဉ်လူသတ်သမားကဆွဲယူပြီးအသားချိတ်များပေါ်တွင်တင်သည်။ ပျော်စရာလား Daylight Hacks အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Dead များကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်မည်သည့်ဘက်၌ရှိနေသည်ကိုအနိုင်ရရှိခြင်းအားဖြင့်၎င်းကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။
Daylight Hack နှင့် Cheat များကလူကြိုက်များသည်
Daylight ESP နှင့် Wallhack တို့ကသေဆုံးသည်
Daylight Hack နှင့် Cheat များကသေဆုံးသည်
လူသိများသင့်သည်မှာ Dead by Daylight Hack အားလုံးသည်အတူတူမဟုတ်တော့ပါ၊ အခမဲ့ tool တစ်ခုတည်းမှာ Gamepron ၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံသကဲ့သို့တူညီသောအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုဖျော်ဖြေရေးအဖြစ်သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည်၎င်းထက် ပို၍ အလေးအနက်ထားကြသည် - ၎င်းသည်အချို့သူများအတွက်အပြိုင်အဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တတ်နိုင်သမျှဂိမ်းများကိုအနိုင်ရလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်၌တွေ့ရသော Daylight Hack အားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောကမ်းလှမ်းချက်အရ Gamepron သည်ဓာတ်ပုံထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး DBD Hacks နှင့် Cheats ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိသည်။ သုံးစွဲသူများသည်လုံလောက်စွာမရရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများအတွက်အကန့်အသတ်များဖြင့်ကန့်သတ်ထားရှိပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားရသည့်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများ၏အရည်အသွေးကိုလျှော့ချပြီးလူတိုင်းကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်“ သီးသန့်” ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းသည်သွားရမည့်လမ်းဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Dead by Daylight သည်သေနတ်သမားမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ DBD Aimbot ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ဝှက်ခြင်းကိုသိမ်းဆည်းမည့်အခြေအနေများရှိနေသေးသည်။ သင်သည် Killers ၏ထိန်းချုပ်မှုမှလွတ်ကင်းရန်အမြန်သပိတ်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် projectiles ကို အသုံးပြု၍ Survivor ကိုအဆုံးသတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ Dead by Daylight Aimbot သည်သင်လိုအပ်သည့်မည်သည့်စွမ်းရည်ကိုမဆိုပေးလိမ့်မည်။ သင်တွေ့ရသောကျန်ရစ်သူအချို့သည်လိမ္မာပါးနပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DBD ESP နှင့် Wall Hack ကသူတို့ကိုကျော်လွှားရန်ကူညီလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအခွင့်အလမ်းရလာသောအခါသင်ရိုက်ချက်ကိုလက်လွတ်မသွားနိုင်ပါ။
မည်သည့်မေးခွန်းမျှမပါဘဲဆက်သွယ်လိုပါကသင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုမှန်ကန်စေရန်နှင့်ဓါးသွားကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ DBD Aimbot ကိုသင်အားကိုးနိုင်သည်။ အရိုး ဦး စားပေးမှုနှင့် Auto-Aim / Fire တို့ကိုဤကိရိယာတွင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အစမျှသာဖြစ်သည်။ Daylight Aimbot မှ Dead အတွင်းရှိ Instant Kill နှင့် Visible Checks ကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုလည်းသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
Dead by Daylight တွင်ထည့်သွင်းထားသောအသုံးဝင်သောပစ္စည်းများများစွာရှိသည်။ အထူးသဖြင့်သင်သည် Survivors team တွင်ရှိသည်။ သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ DBD ESP နှင့် Wall Hack ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဝှက်ရန်အစက်အပြောက်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ လူသတ်သမားများသည်ဤကိရိယာကို သုံး၍ Survivors များတည်ရှိရာနေရာများနှင့်ဆက်လက်ရှင်သန်သူများအား Killer အတွက်ထပ်တူပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ရန်သူမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်နှင့်၎င်းတို့မည်မျှကျန်းမာရေးရှိသည်ကိုသိရှိထားခြင်းအားဖြင့် Dead by Daylight ကဲ့သို့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအရ Killers 'သည်အနိမ့်ဆုံးကျန်းမာရေးရှိသောကစားသမားများအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မည်။
သင်သည် Survivors ကိုလှည့်ပတ်သွားပြီး Generator ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်၊ သင့်အားသင်၏တိုက်ခိုက်မှုကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ Filter ပါသော Item ESP သည် pick-ups နှင့် consumables များအတွက်ကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအားလုံးအတူတကွကစားထားသည့်ပွဲစဉ်တိုင်းကိုသင်အနိုင်ရလိမ့်မည်။ ငါတို့ကိုမယုံကြဘူးလား? ၎င်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ DBD Hack အတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ Killer ဝါသနာရှင်များသည်အလုပ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်စေရန်ခွင့်ပြုမယ့် Footprint feature တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ သင်၏သားကောင်ကိုမြေတပြင်လုံးတွင်တွေ့ရသောခြေရာကိုလိုက်ခြင်းဖြင့်ခြေရာခံနိုင်ပြီး၎င်းကိုလျင်မြန်စွာသပိတ်ဖြင့်အမြင့်ဆုံးပျက်စီးခြင်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်သင် Survivor ကိုအကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ပြီးသူတို့ကိုလုံးဝမသတ်ဖြတ်နိုင်သေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ High Damage feature သည်သင့်အားချက်ချင်းထုတ်ပစ်ရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။ Survivors သည်ဂိမ်းကိုအနိုင်ယူရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Killer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါကသင်၏အကွာအဝေးမည်မျှဝေးဝေးနေသည်ကိုကြည့်ရန်အကွာအဝေးအင်္ဂါရပ်ကိုကြည့်။ အကွာအဝေးအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ထောက်ခံမှုမည်မျှရှိသည်ကိုတွက်ဆနိုင်သည်။
၎င်းကို Dead Daylight အားဖြင့်လိုက်ရှာခြင်းသို့မဟုတ်အမဲလိုက်ခြင်းခံရခြင်းကြောင့်၎င်းအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dead အား Daylight Cheat တွင်ထည့်သွင်းထားသောအင်္ဂါရပ်ပမာဏသည်လူများသည်သူတို့၏ hacking လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်လာရသည့်အကြောင်းအရင်းကြီးဖြစ်သည်။ DBD Hacks များသည်လူကြိုက်များလာသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားသူများလိုလိုရှာဖွေနေသူများကိုသာကျွန်ုပ်တို့အစေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေထားပြီးဖြစ်သောကိရိယာတစ်ခုပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်တိုးတက်ရန်မည်သည့်အခါကမျှငြင်းဆိုမည်မဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Dead by Daylight Hack သည်စျေးကွက်ထဲရှိနံပါတ်တစ်နေရာတွင်အလွယ်တကူရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ 1D Radar၊ Remoals (သင်အားမကောင်းဆိုးဝါးဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ မြူခိုး / မီးခိုး) များကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သတိပေးစနစ်အပါအ ၀ င်အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ သင့်အားမယုံနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားသောပြိုင်ဆိုင်မှုကိုတားဆီးရန်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
ဤနှုန်းထားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Gamepron အသုံးပြုသူအား router ကိစ္စရပ်များရပ်တန့်စေနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက်အနိုင်ရဘက်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတာသင်သိချင်ရင်ထုတ်ကုန်သော့ကိုဝယ်ပါ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ Daylight Hacks မှကျွန်ုပ်တို့၏ Dead ကိုလက်လှမ်းမီပါ။
Daylight Hack ခြင်းဖြင့်သေ မေးခွန်းလွှာ
အဘယ်ကြောင့် Daylight Hacks အားဖြင့်ငါတို့သေ
သငျသညျ lackluster DBD Hack ကအတူမှီဝဲချင်ကြပါဘူး, အထူးသဖြင့်သင်ထုတ်ကုန်များအတွက်ပေးဆောင်လျှင်။ မင်းကိုပိတ်ပင်တော့မယ့်အခမဲ့ tools တွေအများကြီးရှိတယ်။ သင်အလွန်ချစ်သောဂိမ်းမှပိုမိုထွက်ခွာသွားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Daylight Hack မှကျွန်ုပ်တို့၏အပြည့်အဝနှင့်အသွင်အပြင်လက္ခဏာကိုအသုံးပြုထားသော Dead ကိုအသုံးပြုပါ။ အနိုင်ရအမြဲအမှုအရာပိုကောင်းစေမယ်!
အဘယ်ကြောင့် Daylight Aimbot အားဖြင့်ငါတို့သေ
Dead by Daylight Aimbot ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မည်သည့်ဇာတ်ကောင်ကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ Michael Myers (သို့) သူနာပြုတို့လိုအသစ်ထွက်လာတဲ့ဇာတ်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ Dead Daylight Aimbot ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ swing / projectile counts တိုင်းလိုလိုရိုက်ချက်တွေဘယ်တော့မှမလွတ်သွားဘူးဆိုတာသင်သိတဲ့အခါစိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းသွားပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် Daylight ESP အားဖြင့်ငါတို့သေ
လက်ျာ ESP ကိရိယာသည်သင်ပွဲစဉ်ကိုချဉ်းကပ်ပုံကိုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်၊ အထူးသဖြင့် Dead by Daylight ကဲ့သို့သောဂိမ်းမျိုးတွင်ဖြစ်သည်။ ဤဂိမ်းသည်အသင်းတစ်ခုစီအတွက်အလုပ်တစ်ခုကိုသင်အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ လူသတ်သမားများသည် Survivors များကိုသတ်ပစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး Survivors များသည် Generators များကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DBD ESP ဖြင့် Survivors နှင့် Generators နှစ်ခုလုံးကိုရှာဖွေခြင်းသည်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးသင်မကြာမီသင်ပင်ပန်းနွမ်းလျလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဘယ်ကြောင့် Daylight Wallhack အားဖြင့်ငါတို့သေ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dead အား Daylight Wall Hack ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောအသုံး ၀ င်သောကိရိယာများကိုသင် download ပြုလုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီ feature ကိုအသုံးပြုပြီး Survivors / Killer ဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသိတော့မှာဖြစ်ပြီးရလဒ်ကတော့ပွဲများစွာကိုအနိုင်ရအောင်ကူညီလိမ့်မယ်။ မင်းဘာကြောင့်သုံးတာလဲ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အနိုင်ရခြင်းသည်ပျော်စရာ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ DBD Wall Hack သည်သင်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့် Daylight Norecoil အားဖြင့်ငါတို့သေ
မီလီစက္ကန်မျှဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်သောဂိမ်းတစ်ခုတွင်သင်တတ်နိုင်သမျှတိကျမှန်ကန်မှုရှိမည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ညီမျှခြင်းမှမကောင်းသောအကြံအစည်များကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သင်သည် Survivors ကိုမည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှမတိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ စိုးရိမ်စရာမကောင်းသောအကြံအစည်မရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာရလဒ်အရသင်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်လိမ့်မည်။
Daylight hack အားဖြင့်အကောင်းဆုံး Dead ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ။
Daylight Hack အားဖြင့်အကောင်းဆုံး Dead ကိုရှာတွေ့ဖို့သင်အသင့်တော်ဆုံးနေရာတွင်ရှိနေသည်၊ သို့သော်ပထမ ဦး စွာကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုသင်ဝယ်ယူရမည်။ သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုမသုံးဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ cheat များကိုသင်မရရှိနိုင်ပါ။ Daylight Hack အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Dead ကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်မီသင်ဝယ်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ (သို့မဟုတ်ရင်အလုပ်မလုပ်ပါ)
သင်၏ Dead အား Daylight by hacks သည်အခြားသူများထက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ စျေးကြီးရသနည်း
ဤနေရာတွင် Gamepron ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုန်ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ သင်မြင်ဖူးသောအခြားပံ့ပိုးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းကိုဈေးကြီးသည်ဟုယူမှတ်ပေမည်။ Gamepron နှင့်လှည့်စားနေစဉ်ပိတ်ပင်ထားခြင်းခံရမည်ကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ cheat အားလုံးသည် ၁၀၀% ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်အတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ slot အရေအတွက်ကိုသာကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ တစ်ကြိမ်မှာ
ဤနေရာတွင် Gamepron ၌လူတိုင်းအတွက်သင့်လျော်သောအချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်မှုသည်အရေးကြီးသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်အလုပ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်သော့များကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် hack ရန်အချိန်မည်မျှရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Dead ကို Daylight by cheat ကိုကြာမြင့်စွာအသုံးပြုရန်သင်အသုံးပြုလိုသည်မရှိသည်ဆိုသည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
Awesome ကို နေ့အလင်းရောင်အားဖြင့်သေလွန်သောသူတို့သည် ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ